Izinto ezisisiseko zombane: Izinto ezisisiseko zombane
Ukuze uqonde nezona ngcamango zilula ze-elektroniki, kufuneka uqale uqonde ukuba yintoni umbane. Emva kwayo yonke loo nto, yonke injongo ye-elektroniki kukufumana umbane ukwenza izinto eziluncedo nezinomdla.
Ingcamango yombane ziqhelekile kwaye ziyamangalisa. Sonke siyazi ukuba yintoni umbane, okanye ubuncinci sinombono ombi, ngokusekwe kumava asebenzayo. Ngokukodwa, qwalasela la manqaku:
Siqhelene kakhulu nombane ohamba phakathi kweentambo. Olo mbane uvela kwizityalo ezitshisa amalahle, ezibamba umoya, okanye ezisebenzisa amandla enyukliya.
Ihamba isuka kwizityalo ezisebenza ngombane isiya ezindlwini zethu ngeentambo ezinkulu ezixhonywe phezulu emoyeni okanye ezingcwatyelwe emhlabeni. Nje ukuba ifike ezindlwini zethu, ihamba ngeengcingo ezindongeni de ifike kwiindawo zombane. Ukusuka apho, sifaka iintambo zombane ukufaka umbane kwizixhobo zombane esixhomekeke kuzo yonke imihla.
Ihlala ixesha elingakanani i-tylenol
Siyazi ukuba umbane awusimahla.
Siyazi ukuba umbane unokugcinwa kwiibhetri. Xa iibhetri zisifa, onke amandla ombane aphelile.
Siyazi ukuba ezinye iintlobo zeebhetri zi zitshajwe , Oko kuthetha ukuba xa bekhutshiwe kuwo wonke umbane, umbane ongaphezulu unokubuyiselwa kubo ngokuwafaka kwitshaja, ehambisa umbane ukusuka kwindawo yombane uye kwibhetri.
Siyazi ukuba umbane unokulinganiswa kuwo Iivolts . Umbane wasekhaya zii-volts ezingama-120 (ezifinyeziweyo eziyi-120 V). Iibhetri ze-Flashlight zii-1.5 volts. Iibhetri zeemoto zii-volts ezili-12.
keflex yedosi yethosi
Siyazi nokuba umbane unokulinganiswa kuwo watts . Iibhalbhu zokukhanya ze-Incandescent zii-60, 75, okanye i-100 watts. Izibane zeCompact fluorescent (CFLs) zinamanani amancinci ombane ombane. I-oven microwaves kunye neenwele ezomileyo zi-1 000 okanye i-1,200 watts.
Singazi kananjalo ukuba ikhona indlela yesithathu yokulinganisa umbane, ebizwa amps . Indawo yokuphuma yombane eqhelekileyo zii-15 amps (ezifinyeziweyo i-15 A).
Kwaye ekugqibeleni, siyazi ukuba umbane unokuba yingozi kakhulu.
Kodwa, uyintoni umbane ngenene? Masiqale ngeendlela ezintathu ezisisiseko zombane: ezizezi, umbane , umbane , kunye isekethe yombane .
Intlawulo yombane ibhekisa kwipropathi esisiseko yemicimbi nokuba oososayensi abayiqondi ngokupheleleyo. Kwanele ukutsho ukuba amasuntswana amabini amancinci enza iiathom- iiproton kunye nee-elektroni - zezona ziphetheyo umbane. Zimbini iintlobo zentlawulo: kulungile kwaye engalunganga . Iiprotoni zinexabiso elifanelekileyo, ii-elektronon zinexabiso elibi.
itshati + yokunxibelelana itshathi yokunxibelelana
Umbane ibhekisa ekuhambeni kwentlawulo yombane eqhutywa zii-elektroni njengoko betsiba ukusuka kwiathom ukuya kwiathom. Umbane ngumbono oqheleke kakhulu: Xa uvula iswitshi, amandla ombane aphuma kuswitshi ngocingo ukuya ekukhanyeni, kwaye igumbi likhanyiswa kwangoko.
Amandla ombane ahamba ngokulula kwezinye iintlobo zeeathom kunezinye. Ii-athomu ezivumela ukuhamba ngoku ngoku zibizwa ababhexeshi , kanti iiathom ezingavumeli ukuhamba ngoku ngoku zibizwa insulators .
An isekethe yombane iluphu evaliweyo eyenziwe ngabaqhubi kunye nezinye izinto zombane anokuhamba kuzo umbane. Umzekelo, isekethe yombane elula inezinto ezintathu: ibhetri, isibane, kunye nocingo lombane oludibanisa ezi zimbini.
Imijikelezo inokuba nzima ngakumbi, ibandakanya amashumi, amakhulu, okanye amawaka okanye izigidi zezinto ezahlukileyo, zonke zinxulunyaniswe nabaqhubi ngeendlela ezilungelelaniswe ngendlela efanelekileyo ukuze icandelo ngalinye lenze isuntswana lalo ukuba negalelo kuyo yonke injongo yesekethe. Kodwa zonke iisekethe kufuneka zithobele umgaqo osisiseko weluphu oluvaliweyo.
Zonke iisekethe kufuneka zenze iluphu evaliweyo ebonelela ngomendo ogqityiweyo ukusuka kumandla ombane (kule meko, ibhetri) ngokusebenzisa izinto ezahlukeneyo ezenza isekethe (kule meko, isibane) kwaye ubuyele kumthombo (kwakhona, Ibhetri).
iipilisi zokulawula amagama kunye nemifanekiso
igama 2016 faka itafile yemixholo
Isiqingatha sobomi be-subutex
Ngaba i-benadryl ingabangela urhudo
ngaphezulu kweekhawuntare meds zomqala obuhlungu